Fomba dimy mamolavola ny SEO | Martech Zone
Fomba dimy manamboatra endrika mamaly ny SEO
Talata, Aprily 9, 2013 Alatsinainy, 10 Jona, 2013 Jayson DeMers
Ny famolavolana mamaly dia mazava ho azy fa raharaha lehibe; raharaha lehibe toa izany Mashable dia nankasitraka ny taona 2013 ho “taona famolavolana mamaly.” Ny ankamaroan'ny matihanina amin'ny Internet dia mahatakatra an'io - ny endrika mamaly dia manova ny fomba fijery sy fahatsapana ary fiasan'ny Internet.
Misy zavatra tsy dia miharihary loatra anefa. Famolavolana mamaly manova SEO ihany koa. Rehefa mijery mihoatra ny CSS ny famolavolana mamaly isika dia mahita fiovana lehibe amin'ny fomba fitadiavana izay misy fiatraikany amin'ny fitadiavana finday sy ny birao.
Inona ireo olana SEO nateraky ny fisian'ny famolavolana mamaly? Ireto misy dimy.
1. Tian'i Google ny famolavolana mamaly, midika izany fa ny valin'ny fikarohana dia mety hanohana ireo tranonkala mampiasa fomba fanao tsara indrindra.
Na dia misalasala aza izahay manambara tsy misy saina fa Google dia tia ny RWD, dia afaka mamantatra ny fifamatorana matanjaka amin'ny fanao tsara indrindra RWD isika. Rehefa avy Lahatsoratra bilaogin'i Google momba ny Design Responsive, SEO Round Table dia namoaka lahatsoratra iray milaza ny antony maninona no tian'ny Google ny famolavolana mamaly. Ireo antony telo - atiny tsy misy tahadika, tsy misy olana URL canonika ary tsy misy olana amin'ny familiana - dia ampahany amin'ny arsenalin'ny SEO matanjaka avokoa.
Rehefa mikorontana i Google dia mitsambikina daholo ny rehetra. Toy izany koa ny famolavolana mamaly. Satria i Google dia nanoratra ny Mobile Playbook, misy dikany ihany ny manome azy ireo fanajana mendrika ny finday sy ny fandraisana andraikitra mamaly. Rehefa manohy miova ny algorithma mandritra ny taona 2013 sy ny sisa, dia angamba hahita bebe kokoa ny fihenan-tsofina amin'ireo tranonkala mampiasa am-pahombiazana ny endrika famaliana.
Raha aleon'i Google ny famolavolana mamaly, dia mpanova lalao lehibe ho an'ny karoka izany.
2. Ireo mpampiasa finday dia maniry fanandraman-javatra tsara, ary ny tranokala mamaly dia manome ny kalitaon'ny tranokala tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa finday.
Ity teboka etsy ambony ity dia somary nifanaritaka be ihany. Na izany aza, teboka iray lehibe ho an'ny SEO izy io. Ity ny fomba fiasan'izy io.
Mihamaro ny mpampiasa mandehandeha. Mahazo mpitsidika finday betsaka kokoa noho ny teo aloha ny tranonkalanao ankehitriny. Matokia ahy; zahao ny Analytics. Mila traikefa tsara ireo mpampiasa finday rehetra ireo. Arakaraka ny maha tsara ny zavatra niainan'izy ireo no mahatsara ny SEO anao. Ity no antony.
Ny kalitaon'ny tranonkala dia singa SEO lehibe. Taham-pisondrotana avo mety ho fitokonana lehibe amin'ny kalitaon'ny tranokala. Arakaraka ny maha tsara ny traikefan'ny mpampiasa anao no mampitombo ny sanda SEO anao. Rehefa mitsidika tranokala tsy voavolavola na mamaly ny mpampiasa finday dia azo inoana kokoa fa hiakatra izy ireo, hanaratsy tsikelikely ny kalitaon'ny tranokalanao. Ity teboka momba ny kalitao sy UX ity dia iadian-kevitra rehetra momba an'i Kristina Kledzik, izay lahatsoratra ao Moz mahatonga ny tranga fa ny tranokala tsirairay dia tokony hanao ny switch switch.
Rehefa mandeha ny SEO, ity no olana mamaly lehibe indrindra. Ao amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny famolavolana mamaly, Smashing Magazine dia nanambara fa, "ny metrika manan-danja indrindra dia ny fomba fiasan'ny tranonkala ho an'ny mpampiasa," ary manitrikitrika fa ilaina ny tranonkala mandray andraikitra.
Mba hahafahana manompo bebe kokoa ny mpihaino finday mitombo dia tsy maintsy omenao azy ireo ny traikefan'ny mpampiasa ilain'izy ireo. Io no hany fomba hitehirizana ny kalitaon'ny tranokala sy hahazoana ny laharam-pikarohana tsara kokoa.
3. Nahazo indexing tsaratsara kokoa ireo tranonkala mandray andraikitra, noho izany, ny valin'ny fikarohana avo kokoa.
Noho ny algorithman'i Google intuitive sy ny tag an'ny switchboard, natolotra ho an'ny mpampiasa finday tsara ny tranonkala. Na izany aza, ny tranonkala mandray andraikitra no safidy tsara indrindra amin'ny fizotran'ny fanondroana anarana madio sy haingana ary marina.
Ireo fomba fanao amin'ny fanoratan-Google dia toa mankasitraka ireo tranonkala mampiasa ny fomba fanao tena mamaly, ireo “tranonkala izay manompo ny fitaovana rehetra amin'ny URL iray ihany, miaraka amin'ny URL tsirairay ny HTML mitovy amin'ny fitaovana rehetra ary mampiasa CSS fotsiny mba hanovana ny fomba fanomezana ny pejy ao amin'ny fitaovana. ” Ity dia ampahany amin'ny Torolàlana an'i Google amin'ny "fananganana tranokala nohavaozina tamin'ny smartphone", izay azonao adika amin'ny ankapobeny amin'ny "tranokala voaatsara amin'ny motera fikarohana." Ankoatra izay, nambaran'izy ireo mazava tsara fa, "ity no fanoloran-kevitra omen'i Google."
Raha tianao ny hanondroan'ny Google ny tranokalanao amin'ny fomba haingana sy haingana indrindra dia azonao atao ny mandray ny tenin'izy ireo momba ilay olana: ampiasao ny famolavolana mamaly. Araho ny torohevitr'izy ireo, dia hikarakara anao amin'ny fomba mety izy ireo raha ny amin'ny laharana fanoratana sy fikarohana.
4. Ny fametrahana ny atiny sy ny atiny dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny famolavolana mamaly dia ny fanalefahana ny tavy be loatra avy amin'ny tranonkala iray. Mampidi-doza anefa ny "manala tavy". Tokony hitandrina ianao mba tsy hanapaka ny SEO rehefa manapaka sy misintona.
Mba hitazomana ny sanda SEO an'ny tranonkala iray, ny atiny mifandraika rehetra dia tokony hatosika mankany an-tampon'ny pejy. Ny antony? Mba hitazomana ny sanda SEO faran'izay betsaka, ny tranonkala dia tokony hanana atiny avo lenta mihoatra ny andiany finday sy birao. Ny motera fikarohana dia manombana ny fametrahana atiny ary koa ny atiny ihany. Zava-dehibe ny toerana.
Mpanamboatra sy mpamorona marobe mandray andraikitra no tia sary, slider ary menus habaka eny an-tampon'ny pejy. Ny korontana toy izany dia mety hiteraka olana amin'ny SEO. Betsaka ny tranonkala no manohana ny minimalism sy ny fahatsoran'ireo tranonkala atosiky ny atiny. Mandrosoa dia namaritra ny "atiny voalohany" ho fironana famolavolana tranonkala voalohany tamin'ny taona 2013. Manana heviny madio ho an'ny SEO, UX, RWD, CRO (ary ny akameonim-pirazanana hafa tianao hatsipy any). Mba hitazomana ny endrik'ilay sambo, ento mankany an-tampon'ny pejy io atiny tia SEO io.
5. Ny URL finday, raha tokony ho tranokala mamaly dia mbola safidy iray ho an'ny SEO.
Na eo aza ny fihazakazaky ny areti-mandringana mankany amin'ny RWD, misy ireo mpitsabo sasany mbola manohana ny fomba fitadiavana URL finday. Bryson Meunier dia manazava ny raharaha momba azy Lahatsoratra Search Engine Land: "Ny famolavolana tranonkala mamaly dia toa manana ny lazany tsy mendrika noho izy no safidy tsara indrindra ho an'ny SEO. Raha ny tena izy, ny URL finday afaka ho safidy tsara indrindra amin'ny SEO. "
Ie, kankana goavambe be izany. [Ampidiro ireo mpitaingin-tsoavaly noho ny toerana tian'izy ireo.] Soa ihany fa afaka manavaka ny kinova ao amin'ny tranonkala i Google. Noho izany, ny fiziriziriana URL iray ho an'ny tanjon'ny SEO dia tsy ady hevitra, noho ny fampidirana ireo mari-pamantarana switchboard.
Meunier dia manao ilay tranga hoe mikaroka hafa ny mpampiasa finday ary mitady fampahalalana samihafa, tsy mitovy amin'ireo mpampiasa birao. (Tsy mino aho.) Araka izany, hoy izy, mety ho tranonkala tsara indrindra no manompo azy ireo - izany hoe tranokala notohizan'ny dynamika. Ho fanampin'izay, Meunier dia manantitrantitra ny mety maha-zava-dehibe ny tranokala finday misaraka amin'ny fijerin'ny hafainganan'ny tranokala sy ny UXD, izay manantitrantitra indray ny mpihaino samihafa ny tsenan'ny finday.
Ny famaritana ny lanjan'ny SEO ny famolavolana mamaly dia miankina amin'ny mpihaino anao. Na dia voatonona matetika sy malaza aza ny RWD amin'ny maha-Holy Holy Grail azy, ny orinasa sasany dia mety misafidy tetika SEO izay misy ny URL finday fa tsy fomba fiasa hentitra. Amin'ny ankapobeny, ny lalàna mandroso, na izany aza, ny vahaolana mamaly dia toa mifanaraka indrindra amin'ny herin'ny SEO. Rehefa dinihina tokoa, ny fitazonana ny fahefana ara-potoana ny URL anao tany am-boalohany, ny fanatsorana ny fomba fiasao ary ny fanamafisana ny fitantanana ny atiny dia fomba fanao tsara indrindra SEO izay ao anatin'ny fonosana famoronana mamaly.
Fantatry ny rehetra fa ny SEO dia sehatra miova tsy tapaka. Ny vaovao vaovao sy ny fampahalalana mifanohitra indraindray dia avoaka isan'ora. Tsy misy taitra ny manova ny SEO ny endrika mavitrika. Ny tena tsy nampoizina dia mety hitranga amin'ny maha-zava-dehibe ny fanovana toy izany. Raha te hahomby amin'ny fikarohana dia tsy maintsy miatrika ny revolisiona mamaly ny tranonkala ary manao izay ilaina mba hanaovana ilay switch switch.
Tags: manaiky DesignSEO
Resadresaka Diners Club: fananganana marika sosialy
Ireo siny telo an'ny mpandahateny amin'ny haino aman-jery sosialy
23 Jun 2013 amin'ny 8:05 AM
Lahatsoratra tena tsara ary tohana tohana tsara. Tsy tsapako fa manana fanohanana be dia be amin'ny RWD i Google.
Jul 18, 2013 amin'ny 3: 07 AM
Lahatsoratra be fampahalalana, hitazona ireo hevitra rehetra ireo ao an-tsaiko mandritra ny famolavolana tranonkala. Misaotra
Dec 4, 2013 amin'ny 3: 12 AM
Lahatsoratra tena tsara: D
Aug 6, 2014 amin'ny 2: 35 AM
13 Jul 2015 amin'ny 11:50 PM
Tonga tato amin'ity lahatsoratra ity tato ho ato nefa mbola ilaina ihany. Nanapa-kevitra ihany aho tamin'ny farany fa ny tranokalanay dia haorina am-pahavitrihana ary mandeha tsara izany! Indrindra aorian'ny fanavaozana SEO finday an'ny Google amin'ity taona ity.